Myanmar Clashes: Police, Hired Thugs Attack Students Protesting New Education Law လက်ပံတန်းရှိ ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်းကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အကြမ်းဖက် ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးမှုမြင်ကွင်းများ (ရုပ်သံ) | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းလာရင်တော့ နောက်ဆက်တွဲကိစ္စ ဘယ်သူ့တာဝန်လဲ
ဆဲဗင်းဂျူလိုင် ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံ »
Myanmar Clashes: Police, Hired Thugs Attack Students Protesting New Education Law လက်ပံတန်းရှိ ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်းကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အကြမ်းဖက် ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးမှုမြင်ကွင်းများ (ရုပ်သံ)
လက်ပံတန်းရှိ ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်းကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အကြမ်းဖက် ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးမှုမြင်ကွင်းများ (ရုပ်သံ)
Myanmar Clashes: Police, Hired Thugs Attack Students Protesting New Education Law
LETPADAN, Myanmar (AP) — Hundreds of riot police charged at students protesting Myanmar’s new education law on Tuesday, pummeling them with batons and then dragging them into trucks, bringingaquick, harsh end toaweeklong standoff.
Police threw stones and jumped over fences as they broke up the demonstration. Some students and monks were chased intoaBuddhist monastery, said Honey Oo,astudent leader.
“Many people were beaten and several arrested,” she said by telephone.
Deputy police chief Col. Win Sein said 114 people were detained and several students and police had been injured, but none seriously.
After the crackdown, police were seen celebrating and shouting, “Victory! Victory!”
Myanmar only recently began moving fromahalf-century of brutal military rule toward democracy. But the nominally civilian government installed four years ago has been grappling with the consequences of newfound freedoms of expression. It has been especially sensitive about public protests, arresting hundreds of people since taking office for peacefully expressing their views.
In November, aroundahundred students started protestinganew law that puts all decisions about education policy and curriculum in the hands ofagroup largely made up of government ministers, which critics say undermines the autonomy of universities.
They have been joined by monks and other activists, bringing their number to around 200 in the last nine days, when they startedasit-in onaroad nearamonastery in Letpadan, about 140 kilometers (90 miles) north of Yangon, the country’s biggest city.
They wanted to march to Yangon, but security forces blocked them, formingahuman chain and setting up barbed wire barriers.
Authorities warned “action would be taken” if they tried to go ahead.
Earlier Tuesday, the two sides had appeared close to reaching an agreement. Police said the students could march toanearby town and then be transported to Yangon in government-provided trucks, but then demanded that the protesters refrain from shouting slogans or waving flags along the way.
More than 400 police blocked the road. The protesters, many wearing red T-shirts and bandanas, tried to push their way through the riot police, dressed in helmets and camouflage fatigues. Some monks in maroon robes joined the students.
The police then turned on the students, chasing after them with batons and sticks. Associated Press photographers said some protesters were beaten in the head, punched and kicked as they were dragged to the waiting trucks.
Several protesters were arrested, including two student leaders, Min Thwe Thit and Phyo Phyo Aung.
Myanmar’s government is especially sensitive about protests in Yangon because the city was the scene of 1988 pro-democracy demonstrations that spread through the country, eventually leading to the collapse of the previous military junta.
The government has crushed several protests in and around Yangon in the last week, usually by dragging demonstrators into trucks.
This entry was posted on March 10, 2015 at 11:34 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to “Myanmar Clashes: Police, Hired Thugs Attack Students Protesting New Education Law လက်ပံတန်းရှိ ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်းကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အကြမ်းဖက် ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးမှုမြင်ကွင်းများ (ရုပ်သံ)”
March 11, 2015 at 4:37 am | Reply
ဘယ်ဖက်ခြမ်းက ပုံတွေဟာ လက်ပံတန်းမှာ ၂၀၁၅ မတ်လ ၁၀ ရက်က ကျောင်းသားသပိတ်ကို ဖြိုခွင်းစဉ် တွေ့ရတဲ့ ပုံဖြစ်ပါတယ်။
ညာဖက်ခြမ်းက ပုံတွေကတော့ မိတ္ထိလာမြို့မှာ ၂၀၁၃ မတ်လက မွတ်ဆလင်တွေကို အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်မီးရှို့တဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပုံလုံးမှာ ကူညီပါရစေ ဆိုတဲ့ ပြည်သူ့ရဲတွေ(ရဲယူနီဖောင်းဝတ်ထားလို့သာ ရဲလို့ ပြောရတာပါ။ ရဲတွေတောင် ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပါ) ပါဝင်နေပါတယ်။ လက်ပံတန်းဖြစ်စဉ်ဟာ ကမ္ဘာကျော်သလို မိတ္ထိလာလည်း ကမ္ဘာထိ ပေါက်ပါတယ်။
ဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေကို အတင်းအကျပ် ဖမ်းဆီးပြီး ထိုင်ခိုင်းထားတဲ့ ပုံစံရယ်၊ မိတ္ထိလာက မွတ်ဆလင်တွေ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကို စွန့်လွှတ်ပြီး အ၀တ်တစ်ထည် ကိုယ်တစ်ခုနဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းကို အတင်းအဓမ္မ မောင်းထုတ်နေတဲ့ပုံတွေရယ်မှာ တူညီနေတာတွေ အများကြီးပါ။
အထင်ရှားဆုံးက ခေါင်းပေါ်မှာ လက်တင်ပြီး လူကို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်တဲ့ စနစ်ကို တစ်ပုံစံတည်းသုံးစွဲထားတာကို မြင်ရမှာပါ။
ဒီစနစ်ကို သာမန်အရပ်သားတွေ ဘယ်လိုမှ မသုံးတတ်ပါဘူး။
လက်ပံတန်းမှာ ကျောင်းသားကိုဖမ်းဆီးချိန်မှာ ဖမ်းသူဟာ ရဲဖြစ်နေလို့ လက်မြှောက် လက်ကို ခေါင်းပေါ်တင်ထားခိုင်းတာက သဘာဝကျသေးတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မိတ္ထိလာဖြစ်စဉ်မှာ ဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးက မွတ်ဆလင်တွေကို အတင်းအကျပ် အိမ်တွေကနေ မောင်းထုတ်ကာ အိမ်တွေကို မီးရှို့ခဲ့ရုံသာမက လမ်းမှာတွေ့တဲ့ စာသင်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုပါ အရှင်လတ်လတ် ရိုက်သတ်မီးရှို့ခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ကျူးလွန်သူတွေဟာ ဓာတ်ပုံရိုက်မခံပါဘူး။ ဒါကိုလည်း အဲဒီအချိန်က ဂျာနယ်လစ်တွေ အကုန်သိခဲ့ကြပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ခံရတယ်လို့ ထင်ရင်တောင် ကင်မရာကို ရိုက်ခွဲတာ၊ မင်မိုရီကဒ်တွေကို ချိုးပစ်တာတွေကို စနစ်တကျလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးက မွတ်ဆလင်တွေကို လမ်းပေါ်မှာထုတ်ထားပြီး သူတို့ကို လက်အုပ်ချီကန်တော့ခိုင်းတာ၊ ရှိခိုးခိုင်းတာတွေကိုလည်း လူအများသိရှိခဲ့ကြပြီးသားပါပဲ။ အချို့မြို့တွေမှာ သင်္ဃန်းပတ်ပြီး တော်ရုံလူမမောင်းတတ်တဲ့ ဘူဒိုဇာတွေမောင်းပြီး အိမ်တွေ ဖျက်ပြခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုယ်တိုင်က မွတ်ဆလင်တွေပိုင်သမျှကို လုယက်ဖျက်ဆီး မီးရှို့ခွင့်ကို အတားအဆီးမရှိ လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပြီး မွတ်ဆလင်တွေကို မိတ္ထိလာ အားကစားကွင်းထဲအရောက် အတင်းအကျပ်မောင်းထုတ်ခဲ့တာပါ။ သာမန်အရပ်သားအမည်ခံတဲ့ ဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးက မွတ်ဆလင်တွေကို မောင်းထုတ်ခံရချိန်မှာ မွတ်ဆလင်တွေဟာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ခေါင်းကို လက်ပေါ်တင်ကာ လမ်းလျှောက်ခံခဲ့ရတာဟာ မနေ့က လက်ပံတန်းဖြစ်စဉ်က ကျောင်းသားတွေကို ချုပ်နှောင်ထားတဲ့ ပုံစံနဲ့ အင်မတန်တူညီခဲ့ပါတယ်။
မိတ္ထိလာက ဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေဟာ မနေ့က လက်ပံတန်းမှာ ကွက်တိပြန်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ရပ်အားလုံး အတူတူပါပဲ။ ရိုက်နေတဲ့ပုံစံတွေ အတူတူပါပဲ။ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ ပုံစံတွေဟာ အတူတူပါပဲ။ ပြေးလွှားနေကြရတာတွေဟာ အတူတူပါပဲ။
သေချာပါတယ်။ မှားစရာ မရှိပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်မတန်စနစ်ကျတဲ့ ရက်စက်မှုတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကျူးလွန်ခွင့်ရှိပြီး ယူနီဖောင်းအမျိုးမျိုး လဲတတ်တဲ့ အထူးအခွင့်ရ ပါးကွက်အာဏာသားတွေကို ဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးလို့ ခေါ်တွင်ပါတယ်။
မနေ့ကတော့ သူတို့ဟာ ရဲယူနီဖောင်းကို ၀တ်ထားပါတယ်။
March 11, 2015 at 5:28 am | Reply
Al Khon Bransai
တခု ပြောစရာရှိတယ် .. မနေ့က
ရဲသွပ်က မုတ်ဆိတ်နဲ့လူကို ပြပြီး …
“ ဟင် ဒါတော့ ကျောင်းသား မဟုတ်လောက်ဘူးနော် ”
ဆိုပြီး … ကျောင်းသားသပိတ် သေးသိမ်အောင် ( သူ့အထင် )
ကုလားနဲ့ ဇွတ်စွဲကပ်ဖို့ ကြိုးစားတယ် …
အောက်တန်းကျတဲ့ ၀ံချီး ဆိုတာကို ပြတာက သူ့အပိုင်း
ချက်ချင်း ဒမိုဆယ်လီဗျီတီကြီးတယောက်က …
( ရင်ထဲက ကုလားမုန်း အခံ ရှိပုံလည်း ရပါရဲ့ )
ဟာ ဒီကုလားက ရဲ ဘက်က ၀ိုင်းတွန်းနေတာ ဆိုပြီး
ချက်ချင်း ပုတ်ထုတ်တယ် … ( နောက်ကျောသာ မြင်ရ …
သူ ၀ိုင်းတွန်းနေသလား … ကာကွယ်ပေးနေသလား မသေချာ )
အခု အဖြစ်မှန်က ပေါ်ပြီ … ဒါ ကုလားလည်း မဟုတ်
ဒီမိုကရေစီရမှ အမွှေးရိတ်မယ်ဆို ထားခဲ့တဲ့ ကိုထွန်းထွန်းဦး …
ဒီတော့ ပြောချင်တာမှာ … ရဲသွပ်သာ ဖာကျတာ မဟုတ်ဘူး
ချက်ချင်းလက်ငင်း ကုလားဆိုရင် ပုတ်ထုတ်လိုက်ချင်တဲ့
ကျပ်မပြည့် ဒမို ဆိုသူလည်း ဖာကျတာပါပဲ …
ကုလား ဖြစ်အုန်းတော့ ဘာဖြစ်သလဲ … ကုလားတွေကဆို
ဂုဏ်တောင် ယူလို့ … ခင်ဗျားတို့ ဘာလို့ ဂုဏ်မယူ
နိုင်ကြသလဲ .. ဂုဏ်မယူချင်ကြသလဲ …
( ခင်ဗျားတို့သာ အသိရှိရှိနဲ့ ဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်
တာဝန်သိသိ ယုတ်မာတဲ့ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်နေသူအတွက်
ဂုဏ်ယူတယ် ဘာညာသာ လုပ်ခဲ့ရင် … ကုလားတွေဆိုတာ
အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရင်း သေပစေ … ခင်ဗျားနောက်က
အကုန်ပါလာမှာ .. ) ဒါပေမယ့် ခုတော့ … ဇွတ် ကုလားကို
ဖယ်ထုတ်ဖို့ချည်း စိတ်အားထက်သန် နေကြသလား
သောက်ချဉ်ပဲ ဟျောင့် .. ယီးရမယ် ဒမိုကလေစီ …
နာမည်ထည့်ဆဲလိုက်ရ မကောင်းဖြစ်တော့မယ် …
ယီး ဆယ်လီဗျီတီလား .. စိတ်ဓာတ်က အောက်တန်းကျ …။